Audiobook "သစ်ပင်များကိုစိုက်ပျိုးသူ" | ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
ဒံယလေက | | Audio
ကျွန်တော်ရှာမတွေ့ပါ အော်ဒီယိုစာအုပ်များ ၏စာရင်းဝင်ခံထိုက်ပေ၏ Self- အကူအညီစာအုပ်တွေ ငါခဏတဖန်ဆင်းခဲ့သည်။
သို့သော် Vicens Castellano နှင့်သူ၏ဘလော့ဂ်တို့၏လက်မှဖြစ်သည် အနာပျောက်စေသောစာအုပ်များ ငါအကြံပြုချက်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်: သစ်ပင်များကိုစိုက်သူ။ ကြီးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ပြန်လည်သုံးသပ် de Vicens ကျွန်ုပ်နေထိုင်သော Navarra အထွေထွေစာကြည့်တိုက်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်၎င်းကိုရှာဖွေရန်ကျွန်ုပ်ကိုအားပေးခဲ့သည်။ ၏သင်တန်းက was ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါခေါင်းစဉ်ကို Google ထဲထည့်လိုက်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအလွန်ကောင်းကောင်းရေးထားတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုရှိခဲ့တယ်။
ဤတွင်ဤကြီးစွာသောစာအုပ်များ၏မျိုးပွားသည်။ ၄၂ မိနစ်သာကြာသည် ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ ကစားရန်:
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » နည်းလမ်း » Audio » Audiolibro «သစ်ပင်များကိုစိုက်သူ”
Adriana gonzalez ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်သည်စာအုပ်များကိုနားထောင်နိုင်ခြင်း၏စိတ်ကူးသည်ကောင်း၏၊ ကျွန်ုပ်သည်ရေဒီယိုတွင်အခြားအချိန်၌ပြုလုပ်ပြီးပြီ၊ ကျွန်ုပ်အလွန်သဘောကျသည်၊ ဤသို့ပြုလုပ်ရန်အချိန်ယူရသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်
adriana gonzalez အားပြန်ပြောပါ
အံ့သြစရာကောင်းသည်၊ ကျွန်ုပ်ကြားရသောပထမဆုံးစာအုပ်ဖြစ်ပြီး၊ ဤအစီအစဉ်ကိုဆက်လုပ်ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Toñi Algarra Carrasco ဟုသူကပြောသည်
Toñi Algarra Carrasco သို့စာပြန်ပါ
ဒံယေလ fonck ဟုသူကပြောသည်
Daniel Fonck အားပြန်ကြားပါ
Javier Yonathan Auqui Jayo ဟုသူကပြောသည်
ငါ့ဘဝမှာအသံသွင်းထားတဲ့စာအုပ်တွေရဲ့ထူးကဲလှူဒါန်းမှုက IT ရဲ့အားသာချက်ကိုယူ
Javier Yonathan Auqui Jayo အားပြန်ပြောပါ
ကားလို့စ် Pulgarin ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းတဲ့ပုံပြင်၊ ထည့် ၀ င်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Carlos Pulgarin ကိုပြန်သွားပါ
Beatriz Espinoza Bettancourt ဟုသူကပြောသည်
Beatriz Espinoza Bettancourt အားပြန်ပြောပါ
Gustavo Olvera placeholder ပုံရိပ် ဟုသူကပြောသည်
တကယ့်ကိုကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းပါ၊ သတင်းကကျွန်တော်တို့ကိုပေးနေတဲ့သတင်းစကားပဲ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Gustavo Olvera ကိုပြန်ပြောပါ
Alejandro Ramos ဟုသူကပြောသည်
alejandro ramos အားပြန်ပြောပါ
Jaime Aguilar Cura ဟုသူကပြောသည်
Jaime Aguilar Cura အားပြန်ပြောပါ
ငါကြားရသောပထမ ဦး ဆုံးငါချစ်ကြ !! ကောင်မလေးရဲ့အသံနဲ့အသံသြဇါကအရမ်းကိုကောင်းတယ် !!
လှပတဲ့ပုံပြင်၊ ဒီအော်ဒီယိုစာအုပ်တွေတင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မင်းရဲ့နည်းကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့သစ်ပင်စိုက်တဲ့သူနဲ့တူတယ်၊ စဉ်းစားပါ ... ငါအမေအတွက်အော်ဒီယိုစာအုပ်ကိုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်၊ သူမရေဒီယိုမှာနားထောင်မယ်၊ တစ်ချိန်တည်းမှာတခြားသူတွေလည်းနားထောင်မယ်၊ ရာပေါင်းများစွာသောထောင်ပေါင်းများစွာသည်အချို့သည်၎င်းကိုသူတို့၏ဘ ၀ များတွင်နားလည်ပြီးအသုံးပြုကြလိမ့်မည်။ သူတို့သည်ရောင်ပြန်ဟပ်မှုမှသင်ခန်းစာယူကြလိမ့်မည်။ များစွာသောအခြားသူများကမူ ... သင်ဆက်လက်သွားရန်အရေးမပါလှပါ။ လှပသည်။
ဥရုဂွေးမှ Valeria ရေးပါ။
Valeria ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ မင်းရဲ့စကားကအရမ်းကောင်းတယ်
ဖရန့်ကလင် စစ်သည်တော် ဟုသူကပြောသည်
Franklin Guerrero အားပြန်ပြောပါ
YbaRa ခံစားပါ ဟုသူကပြောသည်
အလွန်ကောင်းသည်၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၏ ၄၂ မိနစ်🙂
Gozce YbaRa ကိုပြန်သွားပါ
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကြားသိခဲ့ရသောပထမ ဦး ဆုံးအရာဖြစ်ပြီး၊
ဖြစ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဝိုင်းရံထားသည့်အခြားအိမ်များအပြင်အခြားအိမ်ရာများစွာကိုအပင်များစိုက်ခြင်းနှင့်ဂရုစိုက်ခြင်းမပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့ရည်ညွှန်းသင့်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အကျိုးကျေးဇူးကိုရှာရန်ကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်သင့်သည်ဖြစ်စေမိမိကိုယ်ကိုခံစားရခြင်းအားဖြင့်ကောင်းမွန်စွာခံစားရရန်လိုအပ်သည်။
Ines Veiga ဟုသူကပြောသည်
Inés Veiga သို့ပြန်သွားပါ
Tere ruiz ဟုသူကပြောသည်
ဒါဟာအမေရိကန်ကို ၄၂ မိနစ်ပေးဖို့လိုတယ်။ ဒီအံ့သြစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုနားထောင်နေတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ဆိတ်ဆိတ်နေတယ်။
Tere Ruiz သို့ပြန်သွားပါ
လုံးဝ Tere သဘောတူသည်။
Clau ကော ဟုသူကပြောသည်
ဂုဏ်ယူပါတယ်! တကယ်တော့ကျွန်တော်ကြားခဲ့ရတဲ့စာအုပ်ကအရမ်းကိုလှတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ငါအများကြီးပိုပြီးနားထောငျဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
Clau Cor အားပြန်ပြောပါ